काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले जे गरे – Sandesh Press
काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले जे गरे
January 12, 2021 175
ट्याक्सी चालक अमृत सापकोटालाई २ जनाले दरबारमार्गमा हात दिए। उनले ट्याक्सी रोके। जोडी नै ट्याक्सी चढे र चक्रपथ लैजान भने। उनले बा१झ ३५० नम्बरको ट्याक्सी चक्रपथतिर हु’इँक्याए। युवा–युवती पछाडि छि’ल्लीरहेका थिए। उनले त्यत्ति वास्ता गरेनन्।
आफ्नै सुरले चलाइरहे। चुनदेवीतिर पुगेपछि पछाडिको आवाज बदलियो। हैन के गर्न थाले भनेर यसो हेरेको त युवती मुख मै थु’न’मा व्यस्त, युवा म’स्त। झो’क च’ल्यो उनलाई ‘के गरेको’ भनेर कराएपछि दुवै रोकिए।
‘ट्याक्सीमा त्यस्तो देख्दा झो’क च’ल्यो, यो तिमीहरुको गेष्ट हाउस हो भनेर झ’पारे,’ अमृतले भने, ‘तिमीहरुलाई प्रहरी चौकी लैजाऊँ भनेपछि सरी भनेर भाडा तिरेर हिँडे।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
ट्याक्सी सहज यातायातको साधन हो। तर केही यात्रुले त्यसैलाई म’स्तीको साधन बनाइदिँदा ट्याक्सी चालकहरु हैरान रहेछन्। ट्याक्सीमा यात्रुले गर्ने व्यवहारबारे बुझ्न उपत्यकाका झण्डै २ सय ट्याक्सी चालकसँग भेट्दा अधिकांश म’स्तीखोर यात्रुबाट कुनै न कुनै बेला है’रान बनेका रहेछन्।
चालक सापकोटाकै अर्को अनुभव पनि त्यस्तै रहेछ। ठाउँ पनि दरबारमार्ग नै। साँझतिर २ जना केटी र ३ जना केटा ट्याक्सीमा आए। एकजना केटा चालकसँगै बसे।
४ जना पछाडि बसे। केटीहरु केटाको काखमा बसेका थिए।पछाडी अर्कै खालको आवाज आएपछि हेर्दा त उनीहरु यौ’ न स’म्प’र्कमा लि’न रै’छन्। केटाको संख्या धेरै भएकाले उनले केही बोलेनन्। भनेको ठाउँमा लगेर झा’रि’दिएँ। पछाडि बसेका केटाहरु पा’इन्ट मि’लाउँदै उ’त्रिए।
उनीहरुको उमेर त्यस्तै १७–१८ थियो होला। ट्याक्सी बागबजारबाट कमल पोखरी हुँदै अगाडि बढ्दै थियो। पछाडि बसेकाहरु छा’डा बो’ले’र है’रा’न। के गरिरहेका छन् भनेर उनले चालकसँगै सीसामा हेरे।
पछाडि त दुवैजना पूरै क’प’डा खो’ले’र च’लि’रा रैछन्। ज्ञानेश्वर पुग्न लाग्दा त ट्याक्सीमै ह’नि’मु’न मनाउने तयारी पो गरे। उनले ट्याक्सी रोकेर थ’र्का’ए’छ’न्। उनीहरु के थ’र्कि’न्थे। उल्टै ‘ट्याक्सी चालक होस् ट्याक्सी चला, धेरै न’करा’ भनेर थ’र्का’ए।
उनले ट्याक्सी चलाए। अगाडि प्रहरी देखेपछि ‘प्रहरीलाई भन्दिऊँ’ भनेपछि ब’ल्ल क’पडा ल’गा’ए’छन्। ‘राति यस्ता प्यासेन्जर त कति भेटिन्छन् कति,’ उनले भने, ‘कहिले काहीँ त दिउँसै पनि उस्तै भेटिन्छन्। कति थ’र्का’उ’नु।’
राति करिब ११ बजे काठमाडौंको ग्रिनल्यान्डबाट लाजिम्पाट जान एक जोडी ट्याक्सीमा चढे। उमेर त्यस्तै २२, देखि २५ हाराहारी। बेलुका प्रायः पछाडिको सिटमा बत्ती बालिँदैन।
बलेको थिएन। मधुरो लाइट भने हुन्छ। उनी आफ्नै तालमा ट्याक्सी चलाइरहेका थिए। माया–प्रेमका कुरा गर्दै थिए। म तिमीलाई यति माया गर्छु, उति माया गर्छु भन्दै थिए। यसो साइड बीचको सिसाबाट हेरेँ। दुवै कि’स’ खाँ’दै म’डा’रिइ’र’हेका रहेछन्।
उनले ‘दाइ तपाईंले के गर्नुभएको यस्तो’ भनेँ। उनीहरुले ‘तँलाई पैसा दिएकै छ। पैसा तिरेपछि ट्याक्सी हाम्रै हुन्छ’ पो भने। उनले लाजिम्पाट पु-याएर फर्किए। एक जोडी म’स्किँ’दै, जि’स्किँ’दै ट्याक्सी भएको ठाउँमा आएर गोकर्ण जाऊँ न भने।
उनीहरु गफमै मस्त थिए। गफ सुन्नै ला’ज लाग्नेखालको थियो रे। ‘अस्ति क’त्ति’को म’ज्जा’ आ’यो’ केटाले सोध्यो। ‘मलाई त निकै दु’ख्यो नि’ केटीले जवाफ फर्काइन्। केटाले आज रमाइलो गर्नुपर्छ है भने।
काठमाडौंमा ट्याक्सी चाहियो ? अब मोबाइल एपबाटै बोलाउनुहोस् भनेको समयमा ट्याक्सी नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? काठमाडौंमा आफू भएकै ठाउँमा भन्ने वित्तिकै ट्याक्सी पाइँदैन । अझ मिटरमै गुड्ने ट्याक्सी पाउन त झन् गाह्रो ।
कसरी खोज्ने ट्याक्सी ? अन्भर स्मार्ट ट्क्यासी नामक एप डाउनलोड गरेपछि त्यसमा आफ्नो विवरण राखेर पहिलो पटक रजिस्टर गर्नुपर्छ । त्यसपछि तपाई सो एप प्रयोग गरेर ट्याक्सी खोज्न सक्नुहुन्छ । सो एप खुल्ने वित्तिकै तपाई भएको स्थान देखाउँछ । त्यसपछि तपाईले आफू जाने स्थानमा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यहाँ अक्षरमा लेख्न पाउने सुविधा पनि छ । त्यसपछ एपले अटोमेटिक रुपमा सबैभन्दा छोटो बाटो सजेस्ट गर्छ । त्यसपछि चाहिँ तपाईले नजिकै रहेको फाइन्ड ट्याक्सी अप्सनमा गएर ट्याक्सी खोज्न सक्नुहुनछ । तपाईको नजिकै रहेका ट्याक्सीहरू त्यहाँ देखाउँछ ।
Nextटोखा दम्पतिको मृत्यु प्रकरणले लियो अर्कै मोड
विद्यालय बन्द को आदेश ,एउटै विद्यालयमा सयौँ विद्यार्थी बिरामी
हेलिकोप्टर दु’र्घटनामा परी पूर्व-पर्यटनमन्त्री अधिकारीको नि’धन